USainath Suryanarayanan, umbhali e-US Ilungelo lokwazi
umbhali: USainath Suryanarayanan
IiBiohazards, IBhlogazards Blog I-Covid-19, Umanyano lwe-EcoHealth, imvelaphi yeSARS-CoV-2, Imvelaphi yesifo, Ikhomishini ye-Lancet ye-COVID
A Uyilo lwesindululo senkxaso-mali fokanye ukwakhiwa kwebiolab entsha kwiYunivesithi yaseColorado State iphakamisa imibuzo malunga nokhuselo nokhuseleko kwii-biolabs ezikhoyo eFort Collins, eColorado.
Isindululo esiyidrafti sifuna inkxaso-mali kumaZiko ezeMpilo kaZwelonke ukubuyisela iziseko zophuhliso “zokuguga” kwii-CSU's IZiko leVector-Borne Infectious Diseases, eyayibizwa ngokuba yiLebhu yeArthropod kunye neLebhu yezifo eziSulelayo (AIDL). Eli ziko likhulisa izinambuzane kunye neelulwane kulingo lwezifo ezosulelayo kunye nezifo eziyingozi ezinje ngeSARS, iZika, Nipah kunye neHendra virus. Uvavanyo lwe-Live-pathogen apho lwenziwa kwinxalenye ye- I-BSL-3 Izibonelelo, ezizelebhu ezixineneyo emoyeni ezinobuchwephesha obukhethekileyo ukunqanda abaphandi ekufumaneni ukosuleleka kunye nokusasazeka kosulelo.
Ababhali besindululo (uTony Schountz noGreg Ebel be-CSU noJonathan Epstein, usekela-mongameli e-EcoHealth Alliance) babhala bathi, "izakhiwo zethu ezininzi zidlulile kubomi bazo obuluncedo." Bancamathisela imifanekiso yokuqokelela ukungunda kunye nokungunda njengobungqina bendawo "ethoba ngokukhawuleza" indawo "evuzayo xa kunethayo."
Isindululo sikwacacisa ukuba uyilo esele lukhona lwelebhu lufuna iisampulu zamalulwane kunye nezinambuzane ezisulelekileyo ukuba "zihanjiswe zisiwe kwizakhiwo ezahlukeneyo ngaphambi kokuba zisetyenziswe." Ithi ii-autoclaves esele zikhona, ezibulala izinto ezinobungozi, "zihlala zingasebenzi kakuhle kwaye kukho inkxalabo efanelekileyo yokuba ziya kuqhubeka nokwenza njalo."
Kungenzeka ukuba iingxaki zigqithise kuba baxhasa isicelo senkxaso mali. Nantsi inkcazo evela kwisindululo senkxaso mali kunye nemifanekiso.
Isindululo siphakamisa imibuzo eliqela: Ngaba ubomi bomntu busemngciphekweni ovela kwizixhobo ezingalunganga ze-AIDL kunye neziseko zophuhliso? Ngaba oku kungangqinelani kunyusa amathuba okuvuza ngengozi kwezifo eziyingozi? Ngaba akhona amanye amaziko amanyeneyo e-EcoHealth kwihlabathi liphela athotyelwe ngokufanayo kwaye angakhuselekanga? Ngaba iimeko ezifanayo bezingakhuselekanga, umzekelo, i-EcoHealth Alliance exhaswa ngemali yi-Wuhan Institute of Virology? Elo ziko ichongiwe njengomthombo onokubakho Ye-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela iCovid-19.
Iirekhodi zekomiti yezokhuseleko ye-CSU (IBC), efunyenwe ngesicelo seerekhodi zoluntu, kubonakala ngathi iqinisa inkxalabo malunga nokhuseleko lwee-biolabs ze-CSU. Umzekelo, imizuzu yentlanganiso ukusukela ngoMeyi 2020 bonisa ukuba umphandi we-CSU ufumene usulelo lwentsholongwane yeZika kunye neempawu emva kokusebenzisa iingcongconi ezosulelekileyo. I-IBC iqaphele: "Inokuba le yayiyinto yokulunywa yingcongconi engazange ibonwe ngexesha lesiphithiphithi ngenxa yokuvalwa kwe-COVID-19 kunye notshintsho."
Ngelishwa, uphando lwezifo ezosulelayo kwi-SARS-CoV-2 lunokuthi luphakamise umngcipheko wokuphelelwa kukukhuseleka kunye nokungahambi kakuhle kwi-CSU. Imizuzu ye-IBC bonakalisa inkxaso ye "Iinkxalabo eziphakanyisiweyo malunga nenani elikhulu leeprojekthi zophando ezibandakanya i-SARS-CoV-2 ebeke uxinzelelo kwizibonelelo ezifana ne-PPE, indawo yeelebhu, kunye nabasebenzi."
Ukuba ungathanda ukufumana uhlaziyo rhoqo malunga nophando lwethu lwe-biohazards, unako bhalisela iincwadana zethu zeveki apha.
IiBiohazards, IBhlogazards Blog inzuzo yomsebenzi, iingozi zaselebhu, izifo ezinokubangela ubhubhane, imingcipheko kunye neengozi zeziqulatho eziphezulu zokuthintela ukhuseleko
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi:
Ii-imeyile ezintsha zibonisa iingxoxo zesayensi malunga nendlela yokuxoxa ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2
Ii-imeyile ezintsha ezisandula ukufunyanwa zinika amagqabantshintshi ngendlela ingxelo eqinisekileyo ephuculwe ngayo malunga nemvelaphi yendalo yenoveli coronavirus SARS-CoV-2, ngelixa imibuzo ephambili yesayensi ishiyekile. Iingxoxo zangaphakathi kunye nokuyilwa kwangoko kweleta yenzululwazi zibonisa iingcali zixoxa ngezikhewu kulwazi kunye nemibuzo engaphendulwanga malunga nemvelaphi yeelebhu, nanjengoko abanye bebefuna ukuthomalalisa iingcamango “zemiphetho” malunga nokuba kungenzeka ukuba intsholongwane ivela kwilebhu.
Izazinzulu ezinempembelelo kunye neendaba ezininzi ziye zabuchaza ubungqina njengo “eyoyikisayo”Le ntsholongwane yavela kwizilwanyana zasendle, hayi kwelebhu. Nangona kunjalo, unyaka emva kwamatyala okuqala axeliweyo e-SARS-CoV-2 kwisixeko sase-China iWuhan, kuncinci okwaziwayo njani okanye phi intsholongwane yavela. Ukuqonda imvelaphi ye-SARS-CoV-2, ebangela isifo i-COVID-19, kungabalulekile ekuthinteleni ubhubhane olandelayo.
I-imeyile yengcali yecoronavirus UNjingalwazi uRalph Baric - ifunyenwe kwisicelo seerekhodi esidlangalaleni yi-US Right to Know-bonisa incoko phakathi kwabameli be-National Academy of Sciences (NAS), kunye neengcali kukhuseleko lwezinto eziphilayo kunye nezifo ezosulelayo ezivela kwiiyunivesithi zase-US kunye Umanyano lwe-EcoHealth.
Ngomhla kaFebruwari 3, iOfisi yeWhite House yoMgaqo-nkqubo wezeNzululwazi nobuChwepheshe (OSTP) wabuza iZiko lezeMfundo kuZwelonke lezeNzululwazi, ubuNjineli kunye noNyango (NASEM) "ukubiza intlanganiso yeengcali… ukuvavanya ukuba yeyiphi idatha, ulwazi kunye neesampulu ezifunekayo ukujongana nokungaziwa, ukuze kuqondwe imvelaphi yendaleko ye-2019-nCoV, kunye nokuphendula ngokufanelekileyo ukuqhambuka kwayo nayiphi na ingcaciso engachananga. ”
I-Baric kunye nezinye iingcali zezifo ezosulelayo zazibandakanyeka kuyilo impendulo. Ii-imeyile zibonisa iingxoxo zangaphakathi zeengcali kunye nefayile ye- Uyilo lwakwangoko yomhla kaFebruwari 4.
Uyilo lwangaphambili luchaze "izimvo zokuqala zeengcali" ukuba "idatha ekhoyo ye-genomic iyahambelana nendalo kwaye okwangoku akukho bungqina bokuba intsholongwane yenzelwe ukusasazeka ngokukhawuleza phakathi kwabantu." Esi sigwebo siyilwayo siphakamise umbuzo, phakathi kubazali: “[buza iingcali ukuba zongeze iindawo ezithile zokubopha iziza?]” Ikwaquka nombhalo osemazantsi kwizibiyeli: indaleko yee-coronaviruses ezinxulumene noko. ”
In Imeyile enye, yomhla kaFebruwari 4, ingcali ngezifo ezosulelayo uTrevor Bedford wathi: “Andizukuchaza iindawo ezibopha apha. Ukuba uqala ukulinganisa ubungqina kukho okuninzi ekufuneka kuqwalaselwe kuzo zombini ezi meko. ” Ngayo "yomibini le miboniso," iBedford ibonakala ibhekisa kwimvelaphi yeelebhu kunye nemeko yemvelaphi yendalo.
Umbuzo weziza ezibophelelayo ubalulekile kwingxoxo-mpikiswano malunga nemvelaphi yeSARS-CoV-2. Iindawo ezibophayo ezahlukileyo kwi-SARS-CoV-2's spike protein confer "Kufutshane kakhulu" ukubopha kunye nokungena kwintsholongwane kwiiseli zomntu, kwaye yenze i-SARS-CoV-2 yosasazeke ngakumbi kune-SARS-CoV. Oososayensi bathi indawo ezizodwa zokubopha zeSARS-CoV-2 zinokuvela ngenxa yoku endalo spillover endle okanye ngamabomu i laboratory Ukuhlaziywa kwakhona ngokhokho wendalo we-SARS-CoV-2.
The ileta yokugqibela epapashwe ngoFebruwari 6 khange zikhankanye iindawo ezibophelelayo okanye ukubakho kwemvelaphi yelebhu. Iyacacisa ukuba ulwazi oluthe kratya luyimfuneko ukumisela imvelaphi ye-SARS-CoV-2. Ileta ithi, “Iingcali zisazisile ukuba iinkcukacha ezongezelelekileyo zolandelelwano lwe-genomic ezivela kubume bomhlaba- nakwexeshana- iisampulu ezahlukeneyo zentsholongwane ziyafuneka ukumisela imvelaphi kunye nokudaleka kwentsholongwane. Iisampulu eziqokelelwe kwangethuba kuqhambuko lwaseWuhan kwaye iisampulu ezivela kwizilwanyana zasendle zingabaluleka kakhulu. ”
Iimeyile zibonisa ezinye iingcali zixoxa ngesidingo solwimi olucacileyo lokuphikisa into echazwe njenge "iingcinga zokuqhekeka" zemvelaphi yelabhoratri. UKristian Andersen, umbhali okhokelayo we iphepha elinempembelelo lezeNdalo Ndigxininisa imvelaphi yendalo ye-SARS-CoV-2, yathi uyilo lwakwangoko "lwalulukhulu, kodwa ndiyazibuza ukuba ingaba kufuneka sizinze ngakumbi kumcimbi wobunjineli." Uqhubeke wathi, “Ukuba enye yeenjongo zolu xwebhu kukuphikisa ezo nkolelo, ndicinga ukuba kubaluleke kakhulu ukuba sikwenze oko ngolwimi olucacileyo…”
In impendulo yakhe, I-Baric ijolise ekudluliseni isiseko sesayensi ngemvelaphi yendalo ye-SARS-CoV-2. “Ndicinga ukuba kufuneka sitsho ukuba oyena mntu usondeleyo kule ntsholongwane (96%) wachongwa kumalulwane ajikeleza emqolombeni eYunnan, China. Oku kuyenza icace gca imvelaphi yezilwanyana. ”
Yokugqibela ileta Ukusuka kubongameli be-NASEM abathathi ndawo kwimvelaphi yentsholongwane. Ithi, “Izifundo zophando ukuqonda ngcono imvelaphi ye-2019-nCoV kunye nendlela ezinxibelelana ngayo neentsholongwane ezifumaneka kumalulwane nakwezinye iintlobo sele ziqhubeka. Esona sizalwane sisondeleyo se-2019-nCoV sibonakala njenge-coronavirus echongwe kwiisampulu ezivela kwilulwane eziqokelelwe e-China. ” Ileta ekubhekiswa kuyo Mbini izifundo eziqhutywa yi-EcoHealth Alliance kunye neWuhan Institute of Virology. Zombini zibeka imvelaphi yendalo ye-SARS-CoV-2.
Kwiiveki ezimbalwa kamva, ileta kamongameli ye-NASEM yavela njengomthombo onegunya lomntu onempembelelo ingxelo yezenzululwazi epapashwe kwi Lancet egqithise ukuqiniseka ngakumbi malunga nemvelaphi ye-SARS-CoV-2. I-USRTK ixeliwe ngaphambili Umongameli we-EcoHealth Alliance uPeter Daszak wayila le ngxelo, eyathi "oososayensi abavela kumazwe amaninzi… bagqiba kwelokuba le coronavirus yavela kwizilwanyana zasendle." Esi sikhundla, ingxelo ithi, "sixhaswa ngakumbi yileta evela kubongameli be-US National Academies of Science, Engineering, and Medicine."
Ukuqeshwa kuka-Peter Daszak kunye namanye amahlakani e-EcoHealth Alliance Ikhomishini yeLancet COVID19 kunye noDaszak kwi Uphando loMbutho wezeMpilo weHlabathi Imvelaphi ye-SARS-CoV-2 ithetha ukuba ukuthembeka kwezi nzame kujongelwa phantsi ukungqubana komdla, nangokubonakala ngathi sele bewugwebe kwangaphambili lo mbandela.
“Imiba esimele ukuyiphepha”
Ii-imeyile zeBaric zikwabonisa ummeli weNAS cebisa kwizazinzulu zase-US kufuneka "bayiphephe" imibuzo malunga nemvelaphi ye-SARS-CoV-2 kwiintlanganiso zamazwe amabini ababecwangcisa kunye neengcali zase-China ze-COVID-19. Ii-imeyile ngoMeyi nangoJuni 2020 zixoxa ngezicwangciso zeentlanganiso. Inxaxheba kwezenzululwazi zaseMelika, uninzi lwazo zingamalungu eNAS IKomiti emileyo yezifo ezasulelayo kunye nezisongelo zempilo zenkulungwane yama-21, Babandakanya uRalph Baric, Peter Daszak, David Franz, James Le Duc, Stanley Perlman, David Relman, Linda Saif, kunye Peiyong Shi.
The abathathi-nxaxheba base China kubandakanya uGeorge Gao, uZhengli Shi, kunye noZhiming Yuan. UGeorge Gao nguMlawuli we-CDC yase China. UZhengli Shi ukhokela uphando lwe-coronavirus eWuhan Institute of Virology, kwaye uZhiming Yuan nguMlawuli weWIV.
In i-imeyile kubathathi-nxaxheba baseMelika malunga neseshoni yocwangciso, iGosa eliPhezulu leNkqubo ye-NAS uBenjamin Rusek uchaze injongo yentlanganiso: “ukukugcwalisa kwimvelaphi yencoko, xoxa ngezihloko / imibuzo (uluhlu kwileta yesimemo sakho kwaye iqhotyoshelwe) kunye nemiba ekunokwenzeka ukuba thintela (imibuzo yemvelaphi, ezopolitiko)… ”
Qhagamshela kwi-imeyile yaseYunivesithi yaseNorth Carolina u-Ralph Baric nge-imeyile enokufumaneka apha: Ii-imeyile zebaric (Iphepha le-83,416)
Ilungelo lase-US lokwazi ukuthumela amaxwebhu avela kwizicelo zethu zeerekhodi zoluntu ze uphando lwethu lwe-biohazards. Qaphela: Amaxwebhu e-FOI kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2, iingozi zokufumana umsebenzi kunye neelebhu zokutya.
IiBiohazards, IBhlogazards Blog intsholongwane ye-Corona, I-Covid-19, Umanyano lwe-EcoHealth, KwiZiko leSizwe lezeNzululwazi, imvelaphi yeSARS-CoV-2